आभाष खड्का बेसहाराको गजल - माडी खबर
माडी खबर calendar_today १५ भाद्र २०७८, 2:37 am
मान्छे भैसकेपछि भन यहाँ कसलाई समस्या पर्दैन ?
देख्न चाहानेहरुको भाग्यमा पनि त आँखा पर्दैन ।।
म आमाको माँया पाइन् भनी यसकारण गुनासो गर्दैन ।
थाहा छ, गरिबलाई पैसा पर्दैन, टुहुरोलाई बाआमा पर्दैन ।
ससुरा ज्यु खान आउनुस,बिरामिको बाहाना नगर्नुस् ।
तिमिहरु खाउ बुहारी म पानी पिउँछु, खाना पर्दैन ।
बाबा उठनुस अस्पताल जाँउ कति दिन ढल्नु हुन्छ ?
भैगो, बुहारी रिसाउँछिन धेरै कर नगर छोरा पर्दैन ।
बाबू तेरो मृतआमाको फोटो ल्याईदे संगै आश्रम लान्छु ।
बरु मलाई लठ्ठी पर्दैन, फेर्नलाई एकजोर कपडा पर्दैन ।
– आभाष खड्का बेसहारा